Facebook — MYSTERY ZILLION
Facebook ကလေးများ ရေးကြမလား
ကိုယ်ပိုင် Facebook လေးများ မပိုင်ချင်ကြဘူးလား ..
ဒီမှာသွား ဒေါင်းပြီး ဆော့ကြပေရော့ ..။
သူများတွေတောင် ဆော့ပြီးကြပြီ ... ဒီမှာ
facebook တို့ my space တို့လို social website တွေက ဘာအကျိုးရှိလဲဟင်?
blogging service တော့ရှိတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။
ကျွန်တော် my space သုံးဖူးပါတယ်။နဲနဲ(တကယ်တော့ တော်တော်)လေးပါတယ်။
ya .. i m also addicted in facebook now .. :71:
add-on applications in facebook are really interesting.
နားလည်ဖူး ဘာတွေမှန်းလဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုဒီဘီ ပြောတဲ့ သူများတွေဆော့နေကြပြီဆိုတဲ့ ဆိုဒ်မှာတော့ စာဖတ်ဖြစ်လိုက်တယ်။ .
လူဂျီးတွေ အဲ့ဒါဒွေ ခက်တာပေါ့။
ပြောရဆိုရခက်တယ်။ ကိုဂျီး exiter မနေ့ကပြောပြီးဘီ။ ကလေးတွေကို သေသေချာချာရှင်းပြပါလို့။
အခုလဲလာပြန်ဘီ ကိုဂျီး ဒီဘီ က ဘယ်လိုဆော့ရမယ်ဆိုတာမပြောပြတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်က ဘောလုံးသမားတွေကို ၀တ်စုံပြည့် ၀တ်ခိုင်းပြီး ဗမာ့ခြင်းလုံးပေးသလိုဖြစ်နေဘီ။ သေသေချာချာမှ မပြောပြတာ။ လူဂျီးတွေကိုက ပြောရဆိုရခက်ပါတယ်လေ။ ခုခေတ်က သူတို့ခေတ်လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာ နားမလည်ကြဘူး။ ရှေ့ရေးကိုတွေပြီး ရင်မောတယ်........
အနော်လဲနားမလည်ဘူး။ ဟီး အဲ့လိုတော်တာ။ :P :P :P
အစ်ကိုကြီး Mr DBA ရေ....
ညီကအခုမှ စလေ့လာတဲ့သူမို့ပါ အဲဒီ facebook တို့ my space တို့က ဘာတွေလဲဗျာ နောက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုသုံးရတာလဲဗျ ညီကအခုမှကြားဖူးလို့ပါ Wordpress တို့လိုလားအစ်ကို
ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင် localhost လေးလုပ်ပြီးသုံးလို့ရတာလားဒီအတိုင်း ကွန်ပျူတာထဲမှာပဲရလားအစ်ကို
ဆိုက်ပေါ်တင်ရသေးလားဗျ စိတ်မရှိနဲ့နော်:77::77::77: ညီကတော့မေးပြီ.:D:D:D......
Facebook, Myspace, Ning အစရှိတာတွေက Social Networking Sites တွေပါ။ Web 2.0 ရဲ့ အနွယ်ဝင်တွေပါ။
Social Networking ဆိုတာ ဘာလဲသိချင်ရင်တော့ ဒါလေး ကြည့်လိုက်ပါ။ Social Networking in Plain English။ YouTube ကဟာလေး။ ( အဲ YouTube သုံးလို့မရရင်တော့ မပြောတတ်တော့ဘူး ) သူက Plain English နဲ့ အလွယ်လေး ရှင်းပြထားတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ gtalk လို Chatting နဲ့ အချိန်ကုန်သလို သူတို့တွေကလည်း Social Networking ဆိုတာကြီးမှာ မျောမျောနေကြပါတယ်။
I have had it ready ..... just " Kamyinkyawing " hee ... :P
However, Friendster, Hi5, Zorpia are more familiar with mm users.
Knowing 1 more thing is getting one more knowledge. :39:
ဒီမှာ ဆိုတဲ့ link ကို သွားလို့မရဘူး။ ကူညီပါအုံးနော်။ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ...:77::77:
ဟုတ်တယ်ဗျို့ ..နော်လည်းဆော်ချင်တယ်...ဒီမှာက လင့်ချိပ်လို့မရဘူး..လုပ်ပါဦးနော်
်Facebook မှာလုပ်လို့ရတဲ့function တွေထဲမှာ
fan club လုပ်တာတို့
Post တွေ၊ Link နဲ့ တခြားလုပ်လို့ရတာတွေကိုသိချင်ပါတယ်၊